U-Wells Fargo wongeza ii-ATM ezingaphezulu kwama-5.000 XNUMX zokurhoxisa imali usebenzisa iApple Pay | Ndisuka mac
U-Wells Fargo wongeza ii-ATM ezingaphezulu kwama-5.000 XNUMX zokurhoxisa imali usebenzisa iApple Pay
Njengoko umnini echaza, u-Wells Fargo, wongeza ngaphezulu kwee-ATM ezingama-5.000 XNUMX zokurhoxisa imali usebenzisa iApple Pay. Kulabo abangaqhelekanga kule nkampani, i-Wells Fargo & Co yinkampani yeenkonzo zezemali eyahlukeneyo kunye nokusebenza kwihlabathi lonke kwaye ngakumbi e-US. U-Wells Fargo yibhanki yesine ngobukhulu e-United States ngokwempahla kunye nebhanki yesithathu ngobukhulu ngentengo yemarike.
Ngaphandle kwamathandabuzo, izigidi zabathengi bale bhanki abangabasebenzisi beApple bayoneliseka ngokusungulwa kwezi ngaphezulu kwee-ATM ezingama-5.000 XNUMX ezinesifundi seNFC esihambelana neApple Pay. Uninzi lwethu lunethamsanqa lokuba iiATMs zethu sele zinalo eli phawu ixesha elide kwaye oku kuyacaca ukuba yinto entle kakhulu kwizinto ezingaphezulu kokukhupha imali kwiATM.
Ezi ntlobo zeeATM zixhaphake eSpain, kuba zezala maxesha kunezinto ezininzi eUnited States, njengabafundi bamashishini amkela iintlawulo zamakhadi. Ngokwenyani, eSpain nakwamanye amazwe sinee-ATMs kunye nee-dataphones zale mihla kuba bafika mva kunase-US, nto leyo ibenza babe banamhlanje ngakumbi kwaye sele sinethuba lokurhola imali sisebenzisa amakhadi angaqhagamshelwa okanye ngokuthe ngqo I-Apple Pay, njengoko kunjalo ngeBanco Santander.
Kuyacaca ukuba olu hlobo lweATM alufumaneki kuzo zonke iibhanki kwaye inokuba yinto eza kuphunyezwa kwihlabathi liphela, kodwa iibhanki ezininzi ziya zisungula indlela yeNFC kwaye zishiya amakhadi ecaleni.ukuze unikezele ngeenkonzo zakho zokuhlawula nge-smartphone okanye "izitikha" ngeNFC. Ndiyathemba ukuba kungekudala izakufikelela kumaziko e-Apple Pay kwilizwe lethu, yiyo loo nto sifuna ukwandisa ukusetyenziswa kwayo ngokungafaniyo ne-US, ene-Apple Pay kodwa engenazo iivenkile kunye neebhanki apho zinokuyisebenzisa khona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » U-Wells Fargo wongeza ii-ATM ezingaphezulu kwama-5.000 XNUMX zokurhoxisa imali usebenzisa iApple Pay
Thumela nayiphi na ividiyo kwi-Apple TV kwi-Mac yakho ngeBeamer